ဓမ္မဂင်္ဂါ: ရဟန်း၊ဟောလီဝုဒ်မင်းသမီးနှင့် အော်စလိုနေမ၀င်ညချမ်းများ(ဓါတ်ပုံ)
နော်ဝေပါလီမန်ရှေ့မှာ အမေအလာကို စောင့်နေသူများနဲ့ အတူ
အမေတည်းခိုမယ့် ဂရင်းဟိုတယ် တဲ့
တကယ်လို့သာ နိုဘယ်ဆုပေးပွဲ တက်ခွင့်မရဘူးဆိုရင် ဒီနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာရှေ့မှာ ဟိုငေးဒီငေးနဲ့ပိတ်ကားထောင်ကြီးကိုပဲ ကြည့်နေရရှာမှာ ၊ တင်ကြိုဖိတ်ကြားထားတဲ့သူတွေသာ တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမို့ မျှော်လင့်ချက်တော့ နည်းလှပါတယ် (ဒါပေမယ့် ကံကောင်းချင်တော့ ပရဟိတစိတ်ကြီးမားလွန်းတဲ့ ဒိန်မတ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ဟိုးအဝေးကြီးက လာခဲ့ရတာဆိုတော့ ကူညီပါရစေ ဆိုပြီး ခမျာမှာ သမီးငယ်ပုလုကွေးလေးကို ချီပြီး တာဝန်ရှိတဲ့သူအဆင့်ဆင့် လိုက်ပြောပေးရှာတာ...နောက်ဆုံးတန်းက ခုံနံပါတ် (၂၆) မှာ တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တာ ကျေးဇူးကြီးလှပေါ့..မယ်မင်းကြီးမ ချမ်းသာပါစေ...
နိုဘယ်လ်ဆုပေးမယ့် အော်စလိုမြို့တော်ခန်းမထဲမှာ ပွဲမစမီ
ရဟန်းနှင့် ဟောလီဝုဒ်မင်းသမီး (နိုဘယ်ဆုပေးမယ့် ခန်းမကြီးထဲ လိုက်ငေးရင်း The Lady မင်းသမီး မီရှဲယိုကိုတွေ့တာနဲ့ ငါက မြန်မာပါ လို့ မိတ်ဆက်လိုက်တော့ I know တဲ့..။ ပြုံးပြုံးပျော်ပျော်ပဲ .။
နိုဘယ်ဆုရှင်တွေ ဆုယူမိန့်ခွန်း( Nobel Lecture) ပေးတဲ့ နေရာမှာ အမှတ်တရလေးတော့ လုပ်ထားမှ (ကိုယ်ဆုယူတဲ့အချိန်ကျတော့ ဒီလောက်လွတ်လပ်ချင်မှ လွတ်လပ်မှာကိုး..းD.....)
ညနေဘက်မှာ နော်ဝေအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာက ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောနေတဲ့ ဒကာမကြီး ဒေါ်စု (လူတွေ များလွန်းလို့ ခြေဖျားထောက်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ရတယ်.. ကိုယ့်ကိုလည်း သူများတွေက ဓါတ်ပုံခိုးခိုးရိုက်တာ မသိချင်ယောင်ဆောင်ရသေး.
(ဆောင်းပါးတွေကိုတော့ နောက်မှ အေးအေးဆေးဆေးေ၇းနိုင်မှာပါ။ )
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 9:33 PM
Teresa Lwin said...
Ashin Phayar, Kyay Zu Bar Phayar. U shared both international & religious knowledge which I cannot experience by myself. Let me read ur post regularly Phayar.
ဝီရဓမ္မ( Brave The Dhamma) said...
(၁) “သောင်းထိုက်စကြာဝဠာ တိုင်းနိုင်ငံတကာတွင် (၇)ခါ(၇)လီ ဘွဲ့ချီသပါတဲ့ ပြိုင်စံမပေါ် နိုင်ငံကျော်ကြီးလည်း ဖြစ်ပေထသော” “သာသနနှင့် တက္ကသီလ၊ ဓမ္မ...
(၁) ဒီအချိန်ရောက်မှတော့ ပို့စ်အသစ်တစ်ခုတင်ဖို့ အချိန်မရှိတော့တာ သေချာတယ်။ည ၁၁း၁၄ နာရီတိတိ။ ည နေခင်းဆီ သင်တန်းတွေ တက်ဖြစ်တယ်။ ပိဋကတ်ဆိုင်...
ငြိမ်းပေးမယ့် အငြိမ်းမနေနိုင်သူများ(၇) မှ အာယသ္မာဂင်္ဂါမောဒန္တော ရွာဦးကျောင်း ၀ါသဘရွာ ကာသိဇနပုဒ် ရက်စွဲ မဟာသက္ကရာဇ်(---------) သို...
မွေးနေ့အလွန် “ အမန် ကီ အရှ” အတွေးများ
(၁) မွေးနေ့အလွန်မနက်ခင်းမှာတော့ သူ့အိပ်ရာဘေးကို အန္ဒိယတိုင်းသတင်းစာတစ်စောင်ရောက်လာပါတယ်။ ဘလော့ဂါကိုနော(အရှင်ဉာနောဘာသာလင်္ကာရ)ရဲ့ ကျေးဇူးပါ...
(၁) ၁၉၈၇ ခုနှစ် မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ကို ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ လင်္ကာတိုလေးတစ်ခုကို အမိအရမှတ်သားရပါတယ်။ “ ကိုသီတိုက်သစ်က ” တဲ့။ မစိုးရိမ်တိုက်သစ...